Dowladda Soomaaliya oo sharci ka soo saartay adeegsiga biyaha - BBC News Somali
Dowladda Soomaaliya oo sharci ka soo saartay adeegsiga biyaha
Image caption Meelaha qaar oo biyuhu ciriiri yihiin
Shirkii golaha wasiirada ee khamiislaha ayaa waxaa lagu ansixiyey hindise sharciyeedka biyaha kaasi oo ay golaha horkeentey wasaarada tamarta, wuxuuna sharcigan ka hadlayaa maareynta iyo xakamaynta biyaha Soomaaliya.
Saalim Caliyoow Ibroow oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha Soomaaliya ayaa BBC-da u xaqiijiyey in hindise sharciyeedkan lagu dhisey siyaasad wax looga qabanayo dhibaatooyinka biyaha ee dalka ka jira.
"Sharciga waxa uu dhigayaa in qof danyar ah aanan biyaha laga jari karin, haddii uu lacagta iska bixin waaye xal ayaa loo raadin" ayuu yiri wasiirka oo intaasi ku daray in qorshuhu yahay in dadka ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan, islamarkaasina raqiis ah.
Warbixin ay horey usoo saartay hay'adda UNICEF ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegey in 45% dadka Soomaaliya ku dhaqan ay heli karaan biyo nadiif ah, halka inta soo hartay ay halis ugu jiraan in ay qaadaan xanuunada shubanka uu ka mid yahay iyo kuwa kale ee biyaha laga qaado nadaafad xumo darteed.
Xakamaynta biyaha ayuu sharciga dhigayaa in marka ay dhacaan masiibooyinka sida abaarta oo kala isticmaalka biyaha mudnaan la kala siiyo isticmaalkooda, bini'aadamka ayaa kaalinta koowaad ah, halka xoolaha ay kaalinta labaad galayaan.
Waxa sidoo kale uu sharciga ka hadlayaa maareynta biyaha oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa biyo badan oo qasaara, lana sameeyo kayd wanaagsan oo biyaha ah.
Shirkadaha biyaha ka ganacsada ayuu sheegey in wasaaradda ay diiwaangalisey, islamarkaasina ay leeyihiin wada-shaqayn, loogana baahanyahay in ay sharciga biyaha fahmaan, kuna dhaqmaan, iyada oo kormeerayaal wasaaradda ka socda loo diri doono ceel kasta iyo meel kasta oo il biyood ah.
Adeegyada asaasiga ah ee dowladda looga baahanyahay ayaa waxaa ka mid ah in shacabka ay helaan biyo nadiif ah oo lacag la'aan ah ama qiimo jaban, balse wasiirka waxa uu sheegey in hadda laga shaqaynayo sharciga, lana dhisayo wakaaladii kheyraadka biyaha.
Ceelashii iyo dhulkii ay horey u lahayd wasaaradda ayuu Saalim Caliyoow Ibroow sheegey in gacanta dowladda lagu soo celin doono.
Sharciga ayaa waxa uu shuruudo ku xirayaa meesha ceel laga qodi karo iyo masaafada ay isu jirsanayaan labo ceel, waxaana qasab ah in meel magaalada banaankeeda ah laga qodo si looga illaaliyo in ay musquluhu ku muusaan, sidoo kale in biyaha yihiin nadiif.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado ka ganacsada biyo-galinta xaafadaha, iyada oo dadka danta yar ay biyaha ka iibsadaan gaari-dameerka.
Sharcigani ayaa waxaa la horgayn doonaa baarlamaanka si uu u ansixiyo, kadibna saxiixa madaxweynaha iyo faafinta rasmiga ah kadib ayuu dhaqangali karaa.
Shuruuc sidan oo kale muhiim u ah ayay horey baarlamaanka u meelmariyeen, balse waxa ka fuley ay aad u yaryihiin, halka sharciyada qaarkood ay dib usoo ceshato hadba xukuumada cusub ee timaada.